Freedom For Burma: မြန်မာနိုင်ငံလူထုလှုပ်ရှားမှုအင်အားစုများ၏ တပ်မတော်အတွင်းရှိ အရာရှိအရာခံ အကြပ်တပ်သားများထံအထူးပန်ကြားလွှာ
မြန်မာနိုင်ငံလူထုလှုပ်ရှားမှုအင်အားစုများ၏ တပ်မတော်အတွင်းရှိ အရာရှိအရာခံ အကြပ်တပ်သားများထံအထူးပန်ကြားလွှာ
“ တပ်မတော်အတွင်းရှိ အရာရှိအရာခံအကြပ်တပ်သားများထံအထူးပန်ကြားလွှာ ”
ရက်စွဲ ။ ။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၊ မတ်လ ( ၁၇ )ရက်
စာအမှတ် ။ ။ ၀၀၄ / ၂၀၁၁ / သပ / မလအ
မင်္ဂလာပါစစ်သည်အပေါင်းတို့ရေ …......... ။
ကိုယ်ကျန်းမာလို့ ၊ စိတ်ချမ်းသာကြပါရဲ့လား ….. ဘ၀နောက်ကျော တွေကောလုံ ခြုံစိတ်ချရရဲ့လား ၊ ကိုယ့်အခွင့်အရေးတွေအတွက်
ဘာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါသလဲ ၊ ရသင့်ရထိုက် တဲ့အခွင့် အရေးတွေဆုံရှုံးနေတာ ၊ ရဟန်းသံဃာ ကျောင်းသား ပြည်သူတွေကို ရန်သူလို
နှိမ်နင်းမှု မပြုချင်ဘဲ ပြု နေရတာတွေ ၊ အထက်အောက် ဖိနှိပ်မှုတွေကြောင့် စိတ်ကုန်နေခဲ့တာတော့ကြာပြီပေါ့နော် ၊ တပ်မတော်က ပေး တဲ့လစာနဲ့ ရိက္ခာကလည်းမိသားစုအသက်ရှင်ရပ်တည်ဘို့ပင် အနိုင်နိုင်မို့ ၊ စု ငွေလေးတွေထုတ်ပြီး စိုက် သုံး ဖို့ကြိုးစားပြန်တော့လည်း
စုငွေတွေပြန်ထုတ်မရတာကြောင့်မိသားစု ဘ၀တွေအဖို့ရရာအလုပ် ပြင်ပ ထွက်လုပ်ရတဲ့ အဖြစ်စတဲ့ မကျေလည် မှုတွေဟာတပ်မတော်ကို
၀င်ခဲ့တုန်းက ယုံကြည်ချက်ခံယူချက်တွေနဲ့ လွဲလွဲကြီးဖြစ်နေမှန်း သိသိနဲ့ နောက်ဆုတ် ထွက်မရ ၊ ရှေ့တိုး ထမ်းပိုးထမ်း နေရတဲ့ ဘ၀မျိုးကြုံနေရတယ် မဟုတ်ပါလား ၊ အမှန်တရားအတွက် လုပ်သင့်တာတွေ သိမြင်နေပေမဲ့လည်း မလုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေအပေါ် မကျေနပ်မှုတွေ
ပြည့်နေပြီလား ။ ကိုယ့်မိသားစုတွေရဲ့ အနာဂါတ်မဲ့နေတဲ့ အခြေအနေတွေကြည့်ပြီး ၊ ကိုယ်ယူထားတဲ့ တာဝန်နဲ့နာခံထားတဲ့ အမိန့်တွေက
တဘက်မှာ ကမ်းပြိုလို့ ၊ တဘက်မှာ သောင်ထွန်းတဲ့ ဖြစ်အင်တွေကို တွေ့မြင်ပြီး ရင်နာ စရာတွေကြုံ နေရတယ်မဟုတ်လား ၊ တပ်မ
တော်သားတို့နေ့စဉ်ဆိုနေကြရတဲ့ သစ္စာ အဓိဌာန်က နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသား တွေကိုကာကွယ်ရန် သစ္စာဆိုကြပေမဲ့လည်းအမှန်တကယ်
ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေက ၊ သစ္စာအဓိဌာန်အပေါ်အဓိပ္ပါယ် တလွဲဖွင့်တဲ့စစ်အာဏာရှင်အုပ်စုကို အကာအကွယ် ပေးဘို့အတွက်ထုတ်ထား
တဲ့အမိန့်ကိုဘဲ အလေးထား လိုက်နာဘို့ အတင်း အကြပ် စေခိုင်း နေတာကြောင့် ၊ သစ္စာအဓိဌာန်အတိုင်း လက်တွေ့ မလုပ် ဆောင်နိုင်
သေးဘူး မဟုတ်ပါလား ဒီလိုနဲ့ ရာစုနှစ် ထက်ဝက်နီးပါး တပ်မတော်နံမည်ကို အလွဲသုံးစား လုပ်ခဲ့လို့ တပ်မတော်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ညှိုးနွမ်း စေခဲ့ရတယ် တနည်းအားဖြင့် မတရားတဲ့အမိန့်များကို နာခံပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ အကျိုး ဆက်တွေကြောင့် တပ်မတော် သားတို့ရဲ့ စစ်ယူနီဖေါင်း
တွေပေါ်မှာ ပေကျံစွန်းထင်းနေတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့  သွေး တွေကို ဖယ်ရှားဆေးကြောဘို့ လိုအပ်ပါတယ် အဲဒီ့လို ဖယ်ရှား ဆေးကြော ပေးဘို့
တာဝန်ရှိနေသူတွေ ဖြစ်တဲ့ မျိုးချစ် တပ်မတော်သား ကောင်းတို့ ရဲ့ တာဝန်ဘဲဖြစ်ပါတယ် ၊ ညီညွတ်မှုနဲ့ သမိုင်းအစဉ်အလာ ကောင်းခဲ့တဲ့
တပ်မတော်ကြီး ပီပီပြင်ပြင် ပြန်လည် ပေါ်ပေါက် လာရန် တပ်မတော်ကြည်း ၊ ရေ ၊ လေတို့ရဲ့ ပူးပေါင်းစွမ်းဆောင်နိုင် မှုက အလွန်အရေး
တကြီး လိုအပ်နေပါတယ် ။
သို့ မှသာ သမိုင်းကြောင်း ကောင်းတဲ့ တပ်မတော်အဖြစ်၎င်း ၊ သားစဉ်မြေးဆက် နာမည်ဆိုးနဲ့ မကျန်ခဲ့ရအောင် စွမ်းဆောင်ကျိုးပန်းချက်
်ကောင်းအဖြစ် သမိုင်းတွင်ဘို့လိုအပ်နေပါတယ် ၊ ဒါကြောင့်မို့ တပ်မတော်သား ကောင်းတို့ ရေစိုးထိတ်မှု ၊ မကျေနပ်မှု ၊ နာကျည်းမှုတွေနဲ့
အတူ ကြားသိမြင်တွေ့နေတဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ ဘ၀ဖြစ်အင်တွေအပြောင်း အလဲအားလုံးဖြစ်ဘို့ အတွက် တွေဝေပြီး ရပ်တန့် မနေပါနဲ့၊ တပ်မတော်သားကောင်းတို့ ရဲ့ အစဉ်အလာ ကောင်းဖြစ်တဲ့ ( ပြည်သူသည်သာအမိ - ပြည်သူသည်သာအဖ ) ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း ပြည်သူတို့ကိုအကာ အကွယ်ပေးဘို့ ပြည်သူ့ ဘက်က ရပ်တည်ပေးဘို့ အတွက် ပြည်သူတရပ်လုံးက သင်တို့ ကို အလိုရှိနေပါတယ် ၊ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံအများစုက တပ်မတော်သား ကောင်းများနည်းတူ ပြည်သူလူထုဘက်က ရပ်တည်ပြီး နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသား တို့ ရဲ့အကျိုး
စီးပွားကို အကာအကွယ် ပေးဘို့ရန် မြန်မာနိုင်ငံ လူထုလှူပ်ရှားမှူအင်အားစုများ ( မလအ ) မှ အလေး အနက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော် ပန်ကြား
လိုက်ပါတယ်ရှင် …......... ။
၂၀၁၁ မှာ ဗျူဟာပြောင်း .…. စံနမူနာကောင်း …................................. ။
စစ်သည်အပေါင်း …… ပြည်သူ့ဘက်ကိုပြောင်း …................................ ။
ကျည်ဆံခလုပ်မောင်း ……. အာဏာရှင်ဘက်ကိုပြောင်း …...................... ။
အာဏာရှင်ဓါတ်ပြားဟောင်း …….. မလိုတော့ပြီညောင်း …...................... ။
ဒါမှနာမည်ကောင်း ………….. ပြည်သူ့တပ်မတော်သားကောင်း …............ ။
ဒီမိုကရေစီစနစ်အသွင်ပြောင်း ………. လူ့အခွင့်အရေးလဲကောင်း ….......... ။
မြန်ပြည်သူအပေါင်း …….. လုံခြုံငြိမ်းချမ်းပါစေကြောင်း …........................ ။
(မလအ)တို့ရဲ့ ….. ဆုမွန်ကောင်းတောင်း …........................................ ။
Posted by Aung Myint Htun at 7:01 PM